Momba anay | Hangzhou Powersonic Equipment Co., Ltd.
Rps-sonic, miaraka amina tanora roa izay tena tia ultrasonic. Ireo mpikambana mpanorina ny RPS-SonIC dia manana mari-pahaizana bakalorea na mihoatra. Izy ireo dia tao amin'ny indostrian'ny ultrasonic nandritra ny 5 taona mahery ary manana traikefa manan-karena amin'ny ultrasound. Ny filozofian'ny orinasa dia: Aza mampiroborobo an-jambany ny vokatra rehetra, mitady ny vokatra mety ho an'ny mpanjifa. Ka alohan'ny laharam-pahamehana tsirairay dia hamafisinay daholo ny pitsopitsony rehetra, ao anatin'izany ny antsipirian'ny fampiharana, ny toetoetran'ny fitaovana, ny fampahalalana manokana momba ny fitaovana.
Talohan'ny taona 2012 dia tsy nivarotra fitaovana fanamafisam-peo branson / dukane / rinco / herrman / telsonic faharoa izahay, nandritra ireo roapolo taona lasa ireo, hitantsika fa mihabetsaka ny olona manana olana amin'ny tapany lehibe amin'ny fitaovana fanamafisam-peo - ny generator sy ny transducer, koa izahay nanapa-kevitra ny hanomboka ny asanay transducer sy generator an'ny transducer sy generator anay manokana. Maro amin'ireo mpampiasa farany no mihaona amin'ny olan'ny transducer, tsy hain'izy ireo hoe maninona no tapaka ny transducer, ary manova tsirairay ny transducer lafo. Raha ny marina, ny transducer branson / dukane / rinco iray dia afaka mampiasa 10 ~ 30 taona, na ny transducer mora indrindra aza dia afaka mampiasa 5 taona eo ho eo. Noho izany dia tsy maintsy misy ny antony sasany raha tapaka ny transducer anao tao anatin'ny herintaona. Izany no antony itiavantsika ny fananganana Rps-sonic, mila manampy ny mpampiasa farany hahafantatra bebe kokoa momba ny transducer isika, hampiasa fitaovana ultrasonic tsara kokoa, hamonjy vola rehefa sendra olana.
Toy izany koa amin'ny mpamokatra herinaratra, ny fandidiana tsy mitombina dia mety hanafohezana ny fampiasana-taonan'ny generator ultrasonic. Noho izany dia mila manao famotopotorana ara-teknika isika alohan'ny hampiasana milina fantsom-pandrefesana ultrasonic. Ny teboka manan-danja amin'ny milina ultrasonic dia ny resonance, ny fitazonana ny ampahany rehetra amin'ny resonance ihany no ahafahan'ny rafitra miasa amin'ny tontolon'ny asa tsara indrindra.
Hatramin'izao dia mbola manana milina fantsona telsonika Branson / dukane / rinco / herrman izahay, hahafahanay manamafy ny transducer / generator rehetra nataonay afaka mifanaraka amin'ny masinina tany am-boalohany.
Mazava ho azy fa azontsika atao ny manolo ny transducer / generator ho an'ny milina fanamafisam-peo Branson / dukane / rinco / herrman telsonic, afaka manao transducer / generator ho an'ny fampiharana ny fitaovanao ultrasonic ihany koa isika. Manome serivisy OEM ho an'ny mpanjifa ivelany izahay, efa manana mpanjifa OEM roa izahay any Etazonia sy Alemanina.
Raha manana olana amin'ny faritra ultrasonic ianao dia tongasoa ny fifandraisana amin'ny Rps-sonic.